iPad Archives | Pyae Heinn Kyaw's Blog
Online ကနေ တိုးတိုးတိတ်တိတ် စတင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်တဲ့ TrackPad နဲ့ MagicKeyboard ပါဝင်လာတဲ့ iPad Pro 2020 အသစ်
Apple, iPad / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE Apple ဟာ iPad Pro 2020 ကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပါပြီ … အဆိုပါ iPad Pro 2020 ဟာ Event သီးသန့်နဲ့ မိတ်ဆက်သွားခဲ့တာမဟုတ်ပဲ AirPods Pro, MacBook 16-inch တို့ကို ရောင်းချခဲ့သလိုမျိုး Online ပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်တင်ပြီးရောင်းချလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိအနေနဲ့ တရုတ်ကလွဲရင် တကမ္ဘာလုံးက Apple Retail Store တွေပိတ်ထားရတာကြောင့် အပြင်မှာကိုယ်တိုင်သွားရောက်စမ်းသပ်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး .. ဒီတော့ iPad Pro 2020 မှာဘာတွေပါဝင်လာသလဲကြည့်လိုက်ရအောင် Performance iPad Pro 2020 ကို A12Z Bionic Chip နဲ့ run ပေးထားတာဖြစ်ပြီး A12z Chip ရဲ့ အသေးစိတ်အတိအကျနဲ့ Benchmark …
Online ကနေ တိုးတိုးတိတ်တိတ် စတင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်တဲ့ TrackPad နဲ့ MagicKeyboard ပါဝင်လာတဲ့ iPad Pro 2020 အသစ် Read More »
Calendar ထဲက Spam Event တွေကို ဖျက်လို့ရမယ့် နည်းလမ်း2ခု
Apple, iOS, iPad, iPadOS, iPhone, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE အခုတလော ကြုံတွေ့နေရတာကတော့ Calendar Event တွေရဲ့ ပြဿနာပါပဲ သင့်အနေနဲ့ Safari မှာ Web browsing လုပ်နေရင်းနေနဲ့ တခြား Website URL တခုကို Auto Redirect လုပ်ခံသွားရမယ် .. အဲ့ဒီ Website ကသင့်ကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့နည်းနဲ့ သူတို့ App ကိုသွင်းခိုင်းမယ် ဥပမာပြောရရင် “သင့်ဖုန်းမှာ Virus တွေတွေ့ထားပါတယ် .. Virus သတ်ဖို့ ဒီ App ကို Download လုပ်လိုက်ပါ” ဆိုတဲ့ App ကြော်ငြာတွေပါ .. ခုနောက်ပိုင်း ဘယ်လောက်ဆိုးလာလဲဆိုရင် Calendar Event တွေပါလုပ်ပြီး တချိန်လုံး Download လုပ်ခိုင်းနေတော့တာပါပဲ Website တခုထဲဝင်ရင်း သင့်ကို …
Calendar ထဲက Spam Event တွေကို ဖျက်လို့ရမယ့် နည်းလမ်း2ခု Read More »
သင့် iPhone, iPad တွေမှာ Storage ပြည့်လာရင် လုပ်ရမယ့်အချက် 10 ချက်
UNICODE ယနေ့ခေတ် Smartphone တွေရဲ့ Storage base model ဟာ အနည်းဆုံး 64GB ကနေစတတ်ကြပါတယ် .. ဒါတွေကလဲ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဥ်အသုံးပြုတဲ့ Application တွေရဲ့ File size ကတဖြေးဖြေးကြီးလာတာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် .. ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး .. Smartphone တလုံးရှိရုံနဲ့ 1 မိနစ်ကို 500MB ဝန်းကျင်လောက် နေရာယူတဲ့ 4K Video တွေပါ ရိုက်ကူးလာတာကြောင့်လဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်လဲ Smartphone ထုတ်လုပ်သူတွေဟာ Base model ကို 16GB, 32GB တွေထုတ်လုပ်ရာကနေ 64GB ကိုပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နေကြပေမယ့် 64GB ဟာလဲ လုံလောက်တဲ့ Option တခုမဟုတ်သေးပါဘူး ဒါကြောင့် သင့် iPhone, iPad တွေမှာ …
သင့် iPhone, iPad တွေမှာ Storage ပြည့်လာရင် လုပ်ရမယ့်အချက် 10 ချက် Read More »
iPhone, iPad တွေမှာ ကွန်ပျူတာမလိုပဲ Ringtone ထည့်သွင်းနည်း (တဆင့်ချင်းစီကို Screenshot များဖြင့် ရှင်းပြပေးထားပါတယ်)
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ iPhone, iPad တွေမှာ ကွန်ပျူတာမလိုပဲ Download လုပ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ် .. ဘယ် iOS Version မှာမဆိုအလုပ်လုပ်ပါတယ် Prerequisite (လိုအပ်ချက်များ) – Private App (Download Link – https://apps.apple.com/au/app/private-browser-with-adblock/id1322366209) – GarageBand App (Download Link – https://apps.apple.com/au/app/garageband/id408709785) ကဲ ဒါဆိုစလိုက်ကြရအောင် Step 1 – YouTube မှာ ကိုယ် Ringtone လုပ်ချင်တဲ့ သီချင်းကိုရှာပြီး ပုံထဲမှာပြထားသလို Share ကနေ Copy Link လုပ်ပါ Step2– Private app ထဲသွားပြီး Copy လုပ်လာတဲ့ …
iPhone, iPad တွေမှာ ကွန်ပျူတာမလိုပဲ Ringtone ထည့်သွင်းနည်း (တဆင့်ချင်းစီကို Screenshot များဖြင့် ရှင်းပြပေးထားပါတယ်) Read More »
Social Media ပေါင်းစုံက Video တွေကို Quality ရွေးပြီး One-click တည်းနဲ့ download လုပ်ကြမယ်
UNICODE ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ Facebook, Instagram, YouTube အစရှိတဲ့ Social media ပေါ်က Videos တွေ Photos တွေကို စိတ်ကြိုက် Quality ရွေးပြီး download လုပ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ် ပထမဆုံးအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ iPhone or iPad ကို iOS 13 နဲ့အထက်တင်ထားဖို့လိုပါတယ် ဒါပြီးရင် Shortcuts app ကို download လုပ်ထားပါ ဒီနေရာမှာ စာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ပါ .. Shortcuts app လေးရှိပြီဆိုရင် Settings > Shortcuts > Allow Untrusted Shortcuts ကို ဖွင့်ပေးပါ .. Shortcuts app ကိုတခါမှမသုံးရသေးတဲ့လူဆိုရင် ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး .. အဲ့ကျ …
Social Media ပေါင်းစုံက Video တွေကို Quality ရွေးပြီး One-click တည်းနဲ့ download လုပ်ကြမယ် Read More »
သင့် iPhone, iPad ပျောက်သွားရင်ပြန်ရှာလို့ရအောင်ဘာတွေလုပ်ထားရမလဲ? ဘယ်လိုပြန်ရှာရမလဲ?
UNICODE iPhone, iPad တွေပျောက်သွားရင် ပြန်ရှာလို့ရအောင် Apple က iCloud service နဲ့ချိတ်ပေးထားတဲ့ Find My iPhone ဆိုတဲ့ feature လေးပါ,ပါတယ် ဒီတော့ ကိုယ့်ဖုန်းမပျောက်ခင် ဒီ Find My iPhone ကို ဖွင့်ထားမှပျောက်သွားတဲ့အခါ ပြန်ရှာလို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ် Find My iPhone ဖွင့်ဖို့အတွက် Settings ထဲဝင်ပြီး ထိပ်ဆုံးက ကိုယ့်နာမည်နဲ့ iCloud ထဲဝင်ပါ .. အဲ့ထဲမှာ Find My ဆိုတာကိုရှာပြီး အဲ့ထဲဝင်လိုက်ပါ Find My ထဲဝင်ပြီးသွားရင် Find My iPhone ဆိုတာကို On လိုက်ပါ .. ဒါ on ထားမှ ဖုန်းပျောက်ရင်ပြန်ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် …
သင့် iPhone, iPad ပျောက်သွားရင်ပြန်ရှာလို့ရအောင်ဘာတွေလုပ်ထားရမလဲ? ဘယ်လိုပြန်ရှာရမလဲ? Read More »